अश्वत्थामा - विकिपिडिया
अश्वत्थामा नारायण अस्त्र प्रयोग गर्दै
धनुष र बाण,तलवार
महाभारतकाे युद्ध हुनुभन्दा अघि द्रोणाचार्य धेरै ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दै हिमालय (ऋषिकेश) पुगे। त्यहाँ तमसा नदीको किनार एउटा दिव्य गुफामा तपेश्वर नाम गरेकाे स्वय्मभू शिवलिग थियो। त्यहाँ गुरु द्रोणाचार्य र तिनकी धर्मपत्नी माता कृपिले शिवको तपस्या गरे। तिनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान शिवले उनीहरूलाई पुत्र प्राप्तिको वरदान दिए। केही समय पछि माता कृपिले एउटा सुन्दर तेजश्वी बालकलाई जन्म दिए। जन्मदै नैं यिनको कण्ठदेखि घोडाको जस्तो हिनहिनकाे आवाज आउने भएकाेले यिनको नाम अश्वत्थामा पर्यो। जन्मदेखि नैं अश्वत्थामाकाे मस्तिकमा एउटा अमूल्य मणि विद्यमान थियो जसले उनलाई दैत्य, दानव, शस्त्र, हानि, देवता, नाग आदिदेखि निर्भय राख्दथ्यो।
महाभारत युद्धको समय, गुरु द्रोणाचार्यले हस्तिनापुर(मेरठ)राज्यप्रति निष्ठावान हुनुको कारण कौरवको साथ दिनु उचित सम्झे। अश्वत्थामा पनि आफ्ना पिताजस्तै शास्त्र अनि शस्त्र विद्यामा निपूर्ण थिए। महाभारतकाे युद्धमा उनले सक्रिय भाग लिएका थिए। महाभारत युद्धमा यिनी कौरव-पक्षका एक सेनापति थिए। उनले भीम-पुत्र घटोत्कचलाई परास्त गरे तथा घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वाको वध गरे। त्यसको अतिरिक्त द्रूपदकुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जअथवाक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहुलाई पनि मारेका थिए। उनले कुंतीभोजका दस पुत्रहरूको वध गरे। पिता-पुत्रको जोडीले महाभारत युध्दका समयमा पाण्डव सेनालाई तितर-बितर गरिदिए।पाण्डवको सेनाको हार देखेर श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाइ कुटनितिकाे सहारा लिन सल्लाह दिए। यसै योजनाकाे फलस्वरूप "अश्वत्थामा मारिए"
जब गुरु द्रोणाचार्यले धर्मराज युधिष्ठिरदेखि अश्वत्थामाको सत्यता जान्न चाही त उनले जवाब दिए-"अश्वत्थामा मारिएको तर हाथी"॥ श्रीकृष्णले त्यसै समय शन्खनाद गरे,जसको शोरदेखि गुरु द्रोणाचार्य आखरी शब्द नही सुनपाओस्। आफ्नो प्रिय पुत्रको मोतको समाचार सुनेर तपाईँले शस्त्र त्याग दिये,अनि युध्द भूमिमा आखे बन्द गर्न शोक अवस्थामा बेट गये। गुरु द्रोणाचार्य जीलाई निहत्ता जानेर द्रोपदीका भाइ द्युष्टद्युम्नले तलवारदेखि तपाईँको शीर काटे। गुरु द्रोणाचार्य जीको निर्मम हत्याका पछि पांडवहरूको जीत हुने लगी। यस प्रकार महाभारत युद्धमा अर्जुनका तीरहरू एवं भीमसेनको गदादेखि कौरवहरूको नाश भयो। दुष्ट र अभिमानी दुर्योधनको जाँघ पनि भीमसेनले मल्लयुद्धमा तोड दिए आफ्नो दुर्योराजा धन की
यस्तो दशा देखेर र आफ्नो पिता द्रोणाचार्यको मृत्युको स्मरण गर्न अश्वत्थामा अधीर भयो। दुर्योधन पानीलोई बान्धने कला जानन्थ्यो। सो जस तालाबका नजिकगदायुध्द हिड रह्यो थियो त्यसै तालाबमा घुस्यो र पानीलोई बाँधेर लुक्यो दुर्योधनका पराजय हुँदै नैं युद्धमा पाण्डवोको जीत पक्की भएको थियो सबै पाण्डव पट्टीका मानिस जीतको खुशीमा मतभएका हो रहोस् थिए।
अश्वत्थामाले द्रोणाचार्य वधका पश्चात आफ्नो पिताको निर्मम हत्याको बदला लिनको लागि पाण्डवहरूमाथी नारायण अस्त्रको प्रयोग गरेको थियो। जसका अघि सारा पाण्डव सेनाले हथियार राखेका थिए| युध्द ह्थ्के पश्चात अश्वत्थामाले द्रोपदीका पाँचो पुत्र र द्युष्टद्युम्नको वध गरिदिए| अश्वत्थामाले अभिमन्यु पुत्र परीक्षितमा बह्मशीर्ष अस्त्रको प्रयोग गरे। अश्वत्थामा अमर छ र आज पनि जीवित छँ।भगवान क्रष्णका श्रापका कारण अश्वत्थामालाई कोड रोग भयो।आज पनि तपाईँ जीवित हे। छुपेर त्यो पांडवहरूका शिविरमा पुग्यो र घोर कालरात्रिमा कृपाचार्य तथा कृतवर्माको सहायतादेखि पांडवहरूका बचे हुये वीर महारथिहरूलाई मार हालयो। केवल यही छैन, त्यसले पांडवोंअश्वत्थामाका यस कुगरमको सगोरुे निंदाको यहाँसम्म कि दुर्योधन तकलाई पनि यो राम्रो छैन लागयो।केवल यही छैन, त्यसले पांडवहरूका पाँचहरू पुत्रहरूका शीर पनि अश्वत्थामाले काट डाले। अश्वत्थामाका यस कुगरमको सगोरुे निंदाको यहाँसम्म कि दुर्योधन तकलाई पनि यो राम्रो छैन लागयो।
पुत्रहरूका हत्यादेखि दुखी द्रौपदी विलापेरने लगी। त्यसको विलापलाई सुन गर्न अर्जुनले त्यस नीच गरम हत्यारे ब्राह्मणका सिरलाई काट हालन प्रतिज्ञा गरे अर्जुनको प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निस्क्यो। श्रीकृष्णलाई सारथी बनाएर एवं आफ्नो गाण्डीव धनुष लिएर अर्जुनले त्यसका पीछा गरे। अश्वत्थामालाई कहीं पनि सुरक्षा छैन मिली त भयका कारण त्यसले अर्जुनमा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गरिदिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रलाई चलाउन त जानन्थ्योमा त्यसलाई फर्काउन भने जानेको थिएन ।
त्यस अति प्रचण्ड तेजोमय अग्निलाई आफ्नोतर्फ आता देख अर्जुनले श्रीकृष्णदेखि विनती गर्यो, “हे जनार्दन! तपाईँ नैं यस त्रिगुणमयी श्रृष्टिलाई रचने भएका परमेश्वर छन्। श्रृष्टिका आदि र अन्तमा तपाईँ नैं शेष रहन्छन्। तपाईँ नैं आफ्नो भक्तजनहरूको रक्षाका लागि अवतार ग्रहण गर्दछन्। तपाईँ नैं ब्रह्मास्वरूप हो रचना गर्दछन्, तपाईँ नैं विष्णु स्वरूप हो पालन गर्दछन् र तपाईँ नैं रुद्रस्वरूप हो संहार गर्दछन्। तपाईँ नैं बतानुहोस कि यो प्रचण्ड अग्नि मेरीतर्फ कहाँदेखि आ रहेको छर यसबाट मेरी रक्षा कसरी हुनेछ?”
श्रीकृष्ण बोले, “छ अर्जुन! तिम्रो भयदेखि व्याकुल भएर अश्वत्थामाले यो ब्रह्मास्त्र तुममा ब्रह्मास्त्रदेखि तिम्रो प्राण घोर संकटमा छ। त्यो अश्वत्थामा यसको प्रयोग त जान्दछ किन्तु यसका निवारणदेखि अनभिज्ञ छ। यसबाट बचनका लागि तिमीलाई पनि आफ्नो ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नु हुनेछ किन कि अन्य कुनै अस्त्रदेखि यसको निवारण हुन सक्तैन।”
श्रीकृष्णको यस मंत्रणालाई सुनेर महारथी अर्जुनले पनि तत्काल आचमन गरेर आफ्नो ब्रह्मास्त्र छोडिदिए। दुइटै ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड गये र प्रचण्ड अग्नि उत्पन्न भएर तीनहरू लोकहरूलाई तप्त गर्न लाग्यो। तिनको लपटहरूदेखि सारा प्रजा दग्ध हुने लगी। यस विनाशलाई देखेर अर्जुनले दोंनहरू ब्रह्मास्त्रहरूलाई लौटा गर्न शान्त गरिदिए र झपट गर्न अश्वत्थामालाई पकड गर्न बाँध लागि श्रीकृष्ण बोले, “हे अर्जुन! धर्मात्मा, सोये हुये, असावधान, मतभएका, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालकलाई मारना धर्मका अनुसार वर्जित छ। यसले धर्मका विरुद्ध आचरण गरेकोछ, सोये हुये निरपराध बालकहरूको हत्याको छ। जीवित रह्नेछ त पुनः पापेर्नेछ। अतः तत्काल यसको वध गरेर र यसको कटा भयो शीर द्रौपदीका सामुन्ने रख गर्न आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गरो।”
श्रीकृष्णका यी शब्दहरूलाई सुननेका पछि पनि धीरवान अर्जुनलाई गुरूपुत्रमा दया नैं आयो र उनले अश्वत्थामालाई जीवित नैं शिविरमाले जाएर द्रौपदीका सामुन्ने उपस्थित गरे। पशुको प्रकार बाँधिएका हुये गुरूपुत्रलाई देख गर्न ममतामयी द्रौपदीको कोमल हृदय पिघल गए त्यसले गुरूपुत्रलाई नमस्कार गरे र त्यसलाई बन्धनमुक्त गर्नका लागि अर्जुनदेखि कहा, “हे आर्यपुत्र! यी गुरूपुत्र तथा ब्राह्मण छन्। ब्राह्मण अश्वत्थामालाई जीवित नैं शिविरमाले जाएर द्रौपदीका सामुन्ने उपस्थित गरे। पशुको प्रकार बाँधिएका हुये गुरूपुत्रलाई देख गर्न ममतामयी द्रौपदीको कोमल हृदय पिघल गए त्यसले गुरूपुत्रलाई नमस्कार गरे र त्यसलाई बन्धनमुक्त गर्नका लागि अर्जुनदेखि कहा, “हे आर्यपुत्र! यी गुरूपुत्र तथा ब्राह्मण छन्। ब्राह्मण सदा पूजनीय हुन्छ र त्यसको हत्या गर्नु पाप छ। तपाईँले यिनको पिता नैं यी अपूर्व शस्त्रास्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त गरेकोछ। पुत्रका रूपमा आचार्य द्रोण नैं तपाईँका सम्मुख बन्दी रूपमा खडा छन्। यिनको वध गर्नको लागि यिनको माता कृपी मेरी प्रकार नैं कातर भएर पुत्र शोकमा विलापेर्नेछ। पुत्रदेखि विशेष मोह हुनको कारण नैं त्यो द्रोणाचार्यका साथ सती भएको होइन। कृपीको आत्मा निरन्तर मलाई कोस्नेछ। यिनको वध गर्नको लागि मेरो मृत पुत्र लौट गर्न त छैन आ सकते! अतः तपाईँ यी मुक्त गर्न दिनुहोस्।”
द्रौपदीका यी न्याय तथा धर्मयुक्त वचनहरूलाई सुन गर्न सगोरुे त्यसको प्रशंसाको किन्तु भीमको क्रोध शान्त भएको होइन यसमाश्रीकृष्णले भने, “हे अर्जुन! शास्त्रहरूका अनुसार पतित ब्राह्मणको वध पनि पाप हो र आततायीलाई दण्ड न दिनु पनि पाप हो। अतः तिमीत्यही गर जो उचित छ।” तिनको कुरालाई बुझेर अर्जुनले आफ्नो तरवारले अश्वत्थामाका सिरका केश काटे र त्यसको मस्तकको मणि निकालले। मणि निस्किएकाले त्यो श्रीहीन भयो। श्रीहीन त त्यो त्यसै क्षण भएको थियो जब त्यसले बालकहरूको हत्याको थियो किन्तु केश मुंड जाने र मणि निकल जानाले त्यो र पनि श्रीहीन भयो र त्यसका शीर झुकए अर्जुनले त्यसलाई त्यसै अपमानित अवस्थामा शिविरदेखि बाहिर निकाल दिए।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अश्वत्थामा&oldid=985558" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०१:११, २० जनवरी २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।